यी हुन् बसमा ह’स्तमै’थुन गरि युवतीको कपालमा बि’र्य फा’ल्ने रविन सार्की
मङ्गलबार २९ पुस, २०७६
एक वर्षअघि ललितपुरको डल्लु–लगनखेल रु’टमा च’ल्ने सार्वजनिक बसमा अ’श्लिल क्रि’याकलाप गरेको आ’रोपमा चितवनबाट एक युवक प’क्राउ परेका छन् । अ’श्लिल ह’र्कत गरेको आ’रोपमा रविन रुचाललाई चितवनबाट प’क्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
महानगरीय अ’पराध महाशाखाको टो’लीले उनलाई चितवनबाट पक्रा’उ गरि काठमाडौं ल्या’एको महाशाखाका एसएसपी सहकुल थापाले प’क्राउ गरेको पु’ष्टि गरे । एक वर्षअघि सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक बसभित्रै अ’श्लिल ह’र्कत गरेको भिडियो भाइरल भएको थियो ।
अधिकारीले भने,‘‘लामो समयदेखि खो’जी जा’री राखेका थियौं । शं’का लागेपछि उनको सामाजिक सञ्जाल पनि नि’गरानीमा रा’खेका थियौं । उनले घ’टनामा आफ्नो सं’लग्नता स्वी’कार गरिसकेका छन् ।’’
भिडियोमा युवकको प’हिचान भने हुन सकेको थिएन । महाशाखाका एक अधिकारीले भने,‘‘लामो समयदेखि खो’जी जा’री राखेका थियौं । शं’का लागेपछि उनको सामाजिक सञ्जाल पनि नि’गरानीमा रा’खेका थियौं । उनले घ’टनामा आफ्नो सं’लग्नता स्वी’कार गरिसकेका छन् ।’’
महाशाखाले ती युवकको खो’जीका लागि वि’शेष टि’म नै प’रिचालन गरेको थियो । भिडियो गत मंसिरमा सार्वजनिक भएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा भिडियो भाइरल भएपछि प्रहरीले पक्रा’उ गर्न न’सकेको भन्दै व्या’पक आ’लोचना पनि भएको थियो । प्रहरीका अनुसार त्यो भिडियो प’क्राउ परेका व्यक्ति आफैँले खि’चेका थिए ।
उनले २०७५ साउन महिनामा डल्लु रुटमा चल्ने बस भित्र एक युवतीलाई ह’स्तमैथुन गरेर कपालमा झा’रेको भिडियो खिचेका थिए। उनले खिचेको भिडियो झन्डै तीन महिनापछि विभिन्न फेसबुक ग्रुप हुँदै पो’र्न ‘पुगेको थियो। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि घट’नाबारे प्रहरीकहाँ उ’जुरी परेको थियो।
प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले समेत चासो देखाउँदै महाशाखालाई युवकको खोजी गर्ने निर्देशन दिएको थियो। एक वर्षसम्म प्रहरीले कुनै जानकारी पाउन सकेको थिए। त्यतिखेर महाशाखाको प्रमुखको जिम्मेवारी धीरजप्रताप सिंहले सम्हालेका थिए।
एक वर्षपछि भने युवक समातिए। धेरैलाई लाग्न सक्छ- के बसमा ह’र्कत गर्ने युवक तिनै हुन् त? प्रहरीसँग के छ प्रमाण?
‘फेसबुक ग्रुपमा भएको च्याटले धेरै सहयोग गरेको छ। त्यसले प्रष्ट हुन्छ त्यस्तो गतिविधि गर्ने उही नै हो। यस्ता अश्लि’ल ग्रुपको खोजी गर्दैगर्दा खुल्दै गयो,’
प्रहरीले युवकसम्म पुग्नुको मुख्य क्लु र प्रमाण एउटा फेसबुक गुपको च्याट भएको दावी गरेको छ। केही समय अघि च्याट गर्ने एक युवकसम्म पुगेर प्रहरीले अनुसन्धान गरेको महाशाखाका एसएसपी सहकुल थापाले बताए। ‘फेसबुक ग्रुपमा भएको च्याटले धेरै सहयोग गरेको छ। त्यसले प्रष्ट हुन्छ त्यस्तो गतिविधि गर्ने उही नै हो। यस्ता अ’श्लि’ल ग्रुपको खोजी गर्दैगर्दा खुल्दै गयो,’ महाशाखाका एसएसपी थापाले भने।
सार्की पेशाले रिक्सा चालक हुन्। १२ कक्षा पढेका भनिएका उनी एउटा कम्पनीको मसला बजारमा पुर्‍याउने काम गर्थे। नयाँ बानेश्वरमा बस्दै आएका उनलाई अश्लि’ल भिडियो बनाएर १५ हजारभन्दा बढी लाइक पुर्‍याउने लो’भ जाग्यो। त्यसपछि यस्तो ह’र्कत गरेको प्रहरीको दा’वी छ। अहिलेसम्म ती युवकले भिडियो अपलोड गराए वापत रकम पाइसकेको भने अनुसन्धानमा खुलेको छैन।
‘भाइरल भिडियो बनाएर पैसा कमाउने उद्देश्य नै देखिन्छ। अहिलेसम्म कति पैसा कमाएर कति भिडियो हालेको छ भन्ने खुल्न सकेको छैन,’ एसएसपी थापाले भने।
बसभित्र भएको अ’श्लिल हर्कतको विषयलाई लिएर गत वर्ष माघको दोस्रो साता केही महिलाहरुले प्रहरीमा उ’जुरी दिएका थिए। त्यसपछि प्रहरीले घट’नाको अनुसन्धानमा जुटेको थियो। प्रहरीले समात्ने थाहा पाएपछि सार्की भागेर भारत पुगेको प्रहरीको दावी छ। फागुन महिनामा भागेर उनी भारत गएका थिए। भारतको दिल्लीमा गएर ३/४ महिना मम बनाउने फ्याक्ट्रीमा काम गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएको छ।
‘हामी अनुसन्धानको क्रममा नै थियौं। प्राविधिक पक्षको मानिस हायर गरेर अनुसन्धान भइरहेको थियो,’ एसएसपी थापा
घ’टना सामान्य भएको जानकारी पाएपछि करिब ३ महिना अघिमात्र उनी चितवन आएका हुन्। ‘हामी अनुसन्धानको क्रममा नै थियौं। प्राविधिक पक्षको मानिस हा’यर गरेर अनु’सन्धान भइरहेको थियो,’ एसएसपी थापाले भने। प्रहरीले घ’टना भएको समय केही दिन आसपा’समा उनको मोबाइलको लोकेसन सम्वन्धित क्षेत्रमा भए नभएको समेत हेरेको एसएसपी थापाले जानकारी दिए।
प्रहरीले समातेका सार्की अविवाहित हुन्। प्रहरीले भिडियोमा देखिएको हात, औंला र हस्त’मैथुन गर्दाको स्टाइल समेत डेमो गरेको थियो। डेमोमा भिडियोमा र सार्कीको एउटै प्रकृति देखिएको प्रहरीको दावी छ।
‘हामीले डेमो पनि गराएर हेरेका छौं। सबै घ’टना क्रममले उनै शत प्रतिशत हो भन्नेमा कुनै दुविधा देखिँदैन,’ एसएसपी थापाले भने।
मुलुकी अ’पराध संहिताले सार्वजनिक स्थानमा यौ’ना’ङ्ग देखाउन तथा कसैलाई अ’श्लील गा’लीगलौ’ज गर्न नि’षेध गरेको छ। यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई छ महिनासम्म कै’द वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै स’जाय हुने व्यवस्था छ। प्रहरीले सार्की वि’रुद्ध भने साइबर अपरा’ध मु’द्दामा म्या’द थप गरेर अनुस’न्धान गर्ने भएको छ।